5000 တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့တစ်နှစ်တာ-Old Norse ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်! - သတင်း Rule
5000 တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့တစ်နှစ်တာ-Old Norse ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်!
သင်နေမကောင်းတဲ့အခါ, သင်ဆရာဝန်ကိုသွား. ထိုအခါဆရာဝန်လိမ့်မည်, ဟုတ်ပါတယ်, ဆေးဝါးသတ်မှတ်. သငျသညျဆေးဝါးများသွားနှင့်ဝယျပါမညျ. သူတို့ကိုသင်ယူ, နှင့်မျှော်လင့်, သငျသညျကောင်းစွာရ.
ဒါဟာကျန်းမာရေးအလုပ်အကိုင်ဒီနေ့ခေတ်ပေါ်တတ်ပုံ n ရောဂါနှင့်ဆေးညွှန်းတဲ့သံသရာ.
မည်သူမဆိုသင်ဆေးဝါးများအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပေးဖို့ဖြစ်လျှင်, သငျသညျဖြစ်နိုင်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး quack ခဲ့ကြောင်းပြော.
အင်္ဂလိပ်: ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးပညာက Man (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား)
သဘာဝဆေးဝါးကသဘာဝနည်းလမ်းများ၏အသုံးပြုမှုသည်, ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ, နှင့်ရိုးရာအလေ့အကျင့်ဝေဒနာတွေကုစား. တိုင်းယဉ်ကျေးမှုကိုသဘာဝဆေးဝါးများ၏ပုံစံရှိပါတယ်. ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအတွက်, ရွာဆေးဝါးလူတို့သည်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ဆရာဝန်များအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်, အပေါ်ဖြတ်သန်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိပညာ သူတို့နောက်သို့လိုက်သောသင်တန်းသားများမှ.
ထိုအနာပျောက်စေနိုင်သောနည်းလမ်းများအတော်များများအမျိုးအစားကသဘာဝဆေးဝါးအောက်မှာလဲကြ. ဤသူများထဲတွင်တိုင်းရင်းဆေးများမှာ, ဖြည့်စွတ်ဆေးဝါး, နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါး.
အများအားဖြင့်, သဘာဝကဆေးဝါးကိုရည်ညွှန်းသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့် ကခေတ်သစ်ဆေးပညာ၏ထွန်းခင်မှာရာအရပျ၌ရှိ.
ဒီဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးဝါးလည်းပါဝင်သည်, သို့မဟုတ် phytotherapy, တရုတျထဲတွင်ပျံ့နှံ့သောဖြစ်ပါသည်, Ayurvedic(သို့မဟုတ်အိန္ဒိယ), နှငျ့ဂရိဆေးပညာ.
ခေတ်သစ်ဆေးပညာ၏ထွန်းအပေါ်သို့, မြားစှာသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များလူလုပ်ဆေးဝါး၏မျက်နှာသာအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအသုံးပြုခြင်းလွှင့်ပစ်. ဤအကုသတချို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အနာပျောက်စေနိုင်သောဂုဏ်သတ္တိအပေါ်အခြေခံထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမေ့လျော့ခဲ့.
ဥပမာအားဖြင့်, ဘိန်း, digitalis, ကွီ, နှင့် Aspirin ကိုအားလုံးတိုင်းရင်းဆေးမှာသူတို့ရဲ့အမြစ်များရှိ.
သဘာဝဆေးဝါးတစ်ဦးပျောက်ဆုံးအနုပညာအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရနိုင်. ဒါဟာအချိန်ကျော်ထိရောက်မှုပျောက်ဆုံးသည်ဟုမဆိုလိုပေ. အချို့ကိစ္စများတွင်, သဘာဝအကုထုံးအမှန်တကယ်ခေတ်သစ်ဆေးပညာထက် သာ. ကောင်း၏. ဒီအလေးအနက်သဘာဝကဆေးဝါးရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအသုံးပြုမှုကိုစဉ်းစားနဲ့လေ့လာအချို့သောဆရာဝန်များကဦးဆောင်
ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ခင်မှာ, အားလုံးမဟုတ်သဘာဝကုစားတရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ဖိစီးမှုဖို့အရေးကြီးတယ်က. ဒါဟာအခမဲ့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လေ့လာခဲ့ပြီးသောသူတို့အားကုစားကြိုးစားကြည့်ပါနဲ့အတော်လေးစွန့်စားမှုသာဖို့ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်း.
ဥပမာအားဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးပညာကိုယူ. ရရှိနိုင်အများအပြားကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်လေ့လာဆေးဖက်ဝင်အပင်များကုစားရှိပါတယ်. သို့သော်, ထိုကဲ့သို့သောချောင်းဆိုးအဖြစ်အသေးစားဝေဒနာတွေနှင့်အတူကိုင်တွယ်သောသူတို့ကိုသာ, အအေးမိ, အဖျားရောဂါ, အရေပြားအဖု, နှင့်၎င်း၏ ilk ကနျြးမာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားဖြင့်အကြံပြုခံရဖို့များပါတယ်. ဤရွေ့ကားကုစားတခါတရံဒြပ်ဆေးပညာထက်သာလွန်များမှာ. ဆေးဖက်ဝင်အပင်များအနုတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိကြောင့်ဤသူကား.
လောလောဆယ်သက်ရောက်မှုနှင့်သဘာဝဆေးပညာ၏ထောက်ခံအားပေးမှုလေ့လာဖို့မြောက်မြားစွာအဖွဲ့အစည်းများ N ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးပညာသောသူတို့တွင်ရှိပါတယ်. သူတို့တန်ဖိုးနည်းနှင့်အတော်လေးစွန့်လွတ်များမှာကတည်းကတချို့ကအစိုးရများနှင့်ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီများပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကိုသဘာဝနည်းလမ်းများ၏အသုံးပြုမှုကိုထောက်ခံ.
သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုများ compile အဖြစ်, ပိုပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ကုသမှုကိုလက်ခံဆေးဝါးများ၏စာရင်းထည့်သွင်းနေကြတယ်. သို့သော်, မြားစှာသောဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ကုသအတုအယောင်ဆေးဝါးဖြစ်သက်သေပြခဲ့ကြ. သူတို့ကသူတို့ကိုသုံးဖြစ်စေကုသမှုသို့မဟုတ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိနိုင်ရန်ဖို့ရှိသည်သောကွောငျ့ဤအအသုံးပြုသူနှင့်အေဂျင်စီများနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကိုယ်စားပြုတယ်.
ယနေ့လူအမြားရှိတယ်တည်ရှိ အခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါးကုသမှု သဘာဝကဆေးဝါးအောက်မှာကဆြုံး. သို့သော်, ၎င်းတို့အားလုံးကိုထိရောက်သောဖြစ်သက်သေပြခဲ့ကြ. သငျသညျဓာတ်ကြမ်းပညာဖော်ပြထားခြင်းနိုင်, ရနံ့ကုထုံ, ဆေးထိုးခြင်း, နှင့်အခြားအခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါးကုသမှု. ဤကုသမှု၏တရားဝင်မှုမှအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တိုင်ပင်ရန်ဆပ်မယ်လို့.
သဘာဝဆေးဝါးများလည်းတစ်ဦးပါလာတဲ့ဆေးဝါးအဖြစ်စဉ်းစားသင့်တယ်. အခုပဲ, လက်ရှိစုပေါင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအတွေးကသဘာဝဆေးဝါးများသာလက်ခံသည်ခေတ်သစ်ဆေးပညာအလေ့အကျင့်ဖြည့်စွက်ဖို့အသုံးပြုစေခြင်းအကြံပြု. အသေးအဖွဲဝေဒနာတွေ၏ထိုကိစ္စတွင်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူငါတို့တကယ်သင်မယ့်အစားသဘာဝအကုထုံးယူမှအကြံပေး.
ခေတ်သစ်ဆေးပညာ၏အလေ့အကျင့်တခုနာမကျန်းဖော်ထုတ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအဘို့အကုသမညွှန်ကြားကိုဗဟိုပြု. ထိုသို့ဆေးကုသမှုသေချာပေါက်တဲ့အခါမှသာနေမကောင်းမပေးစေခြင်းအကြံပြုသောကြောင့်, သဘာဝဆေးဝါးအထောက်အကူဖြစ်ပါသည်. သဘာဝဆေးပညာအသီးအသီးလူနာကျန်းမာရေးကောင်းအလေ့အထကျင့်သုံးစေရန်ကြိုးပမ်း. ဤရွေ့ကားအလေ့အထများကောင်းသောအစားအစာပါဝင်, ကျန်းမာသောလူနေမှု, နှင့်ပုံမှန်သဘာဝအကုသ.
It is this same line of thought that leads our parents to tell us to eat our vegetables. ဟုတ်ကဲ့,ahealthy lifestyle and will do no harm to our well-being. And this is the foundation of natural medicine ñ may it be massage, herbal medicine, aromatherapy or others.
It is funny but true that science, in its quest for excellence, is studying the knowledge of sages past. ဤ, surprisingly, leads us back to the remedies nature offers. The possibilities of finding remedies to everyday illnesses in natural medicine are encouraging. So staying tuned to studying these remedies is worthwhile until we can verify that these therapies are truly helpful to our health and our society.
20740	0 အခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါး, အနာ, ကျန်းမာခြင်း, Herb, Herbalism, ဆေး, Naturopathy, Traditional medicine
← တုပ်ကွေး Shot နှလုံးရောဂါတိုက်ခိုက်မှုများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်? တိုကျို, အစ္စတန်ဘူလ်အဘို့အဦးခေါင်းကို-to-ဦးခေါင်းကိုသွား 2020 အားကစားပြိုင်ပွဲ →